कुमारी लक्ष्मी राईको गर्जन : राष्ट्रपतिमा विद्याको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्छ, नभए सर्वोच्च जान्छौँ::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
कुमारी लक्ष्मी राईको गर्जन : राष्ट्रपतिमा विद्याको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्छ, नभए सर्वोच्च जान्छौँ
काठमाडौँ – तेस्रो राष्ट्रपति को बन्ने? यसको छिनोफानोका लागि मंगलबार निर्वाचन हुँदैछ। वाम गठबन्धनका तर्फबाट वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कुमारी लक्ष्मी राई चुनावी मैदानमा छन्।
वर्तमान राष्ट्रपतिले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले भण्डारीको उम्मेदवारीको विरोध गर्दै राईलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको जनाएको छ। वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार भएका कारण निर्वाचन एउटा औपचारिकतामा सीमित भए पनि उनलाई निर्विरोध हुन नदिन कांग्रेसले राईलाई उम्मेदवार बनाएको हो। यसै सन्दर्भमा कांग्रेसबाट राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेकी राईसँग गरेको कुराकानी:
समय प्रशस्त छ। हामी यस्ता असंवैधानिक कदम चाल्नेहरुविरुद्ध के गर्न सकिन्छ भनी कानुनविद्सँग छलफल जारी छ। भोलि नै जान पनि सकिन्छ।
एमाले नेता नेम्वाङले नै गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सम्झिदै खुलेरै प्रशंशा गर्दै भने यस्तो